Dheeldheel Oo Recreation midiidinnadiisa Job Description / Meelaynta Oo Template Mas'uuliyadda - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Dheeldheel Oo Recreation midiidinnadiisa Job Description / Meelaynta Oo Template Mas'uuliyadda
Dheeldheel Oo Recreation midiidinnadiisa Job Description / Meelaynta Oo Template Mas'uuliyadda
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized 1 Comment 1,258 Views
Samee kala duwan ee waajibaadka ku biiro at Raaxo ama madadaalada xarunta. jadwal laga yaabaa in isticmaalka goobaha quudhin, xajisto iyo in la siiyo qalabka ciyaartoyda ee dhacdooyinka ciyaaraha ama howlaha madadaalada, ama shaqeeyaan tanaasulaad xiiso leh iyo gayanaya.
Supply macluumaad ku saabsan adeegyada, doorashada firaaqada.
faahfaahinta Report of imaanshaha, dakhliga, biilasha, Boos, ama u xaliyo howlaha.
Waxaad dhawrtaa hawlaha si ay u hogaansanaanta qaarkood in daaweynta iyo ilaalinta xeerarka, ama qabanqaabiyaan ay ka saareen macaamiisha buuq badan.
Bixi tigidhada iyo isku uruursadaan eedeeyay ka iibsada.
La socodsii talinayaa ee geedi socodka qaxidda xiritaanka iyo xaaladaha degdegga ah.
Nadiifiya sababo isagoo, baabuurta, tours, compartments, hiilaadka, ama marsho.
oynaan degdeg ah duulimaad, kuraasta, ama indhaha.
Iibiya iyo in la siiyo dareere iibsadayaasha.
Shaqeeyaan mashiinada dhigi, iyo inay wada nadiifsan yahay, simi meelaha barafka ee garoonada ee joogtada ku jiraan skateboard, baseball, iyo laad.
Sheeg ama sharax dalal park dheeldheel macaamiisha si ay u soo jiitaan macaamiisha in ay Raaxo in uu yahay oo kale iyo hawlaha.
Ku lifaaq macluumaad siiyaan dadka waxyaabaha lifaaqa iyaga, ama aaladaha ammaanka macaamiisha.
Hubi si aad u ogaato waxyaabaha Duugga iyo dhaawac soo dejin rajeenayo in yar, kaabidda ah ama masuuliyada dayactirka oo ay ku jiraan qaybaha handaraabada.
Run, safarka, ama sharax isticmaalka qalabka qalliinka jirka ama qalab dheeraad ah barnaamijkii meelaha madadaalada , mahrajaano, ama beeraha dheeldheel.
Kiro, walaac marsho isboortiga iyo waxyaabaha ay ka mid yihiin, dacwana skating, baseballs, kabaha bowling, iyo kursiyada xeebta, ama suuqa.
Xaqiiji, u bartaan, ama feeraan kuraasta ka hor inta garashada macaamiisha in ay baro sida tusaale ahaan mahrajaano iyo tours.
Muuqdaan dhigan firaaqada ah ee beeraha ama garoomo, darto hadiyado, macaamiisha toogtay, iyo shaqo fulinta sida tusaale ahaan kulan dileen.
caawimo Supply macaamiisha galaya ama ka soo baxaysa wiishashka ski, doonyaha, ama raacid xiiso leh, ama sii kordhaya ama dismounting duur-joogta.
Jadwal isticmaalka tasiilaadka madadaalada sida luuqyada bowling, maxkamadaha golf, casharada golf, iyo dheeman softball.
Ka dhig alaabada of marsho, kaydinta iyo helida waxyaalaha iyo qalabka dhismaha.
Akhrinta weedho Aqoonta-fahamka iyo cutubyada diyaariyey DoCS la xiriira shaqada.
Dhagaysi-maxay folks kale Active leh la siiyo fiiro gaar ah oo buuxda, waqti isuna si aad u ogaadaan waxyaalaha la dhisay, weeydiin su'aalo sida ku haboon, oo aan ku cabirayaan at jeer aan habboonayn.
Soo saaridda-On warqad ma aha sida aan habboonayn ee shuruudaha dhagaystayaasha ku ool ah xidhiidhka.
Sheekaysiga-ka hadlayay dadka kale u gudbiyo macluumaad si guul leh.
Hababka Research-Isticmaalka iyo siyaasadaha sayniska si ay u xalliyaan arrimaha.
Criticalthinking-Adeegsanaya sababaynta iyo sababta ay u aqoonsadaan awooda iyo khasaaraha jawaabo bedel, Natiijooyinka ama habab arrimaha.
Active-Learning-fahmo faa'iidooyinka faahfaahinta in waa cusub oo ku saabsan iman kara iyo dhawaan kasta xalinta dhibaatada iyo go'aan qaadashada.
Barashada Xeeladaha-Doorashada oo la isticmaalayo habab teachingPERtutorial iyo daaweynta saxda ah ee xaaladda marka hanashada ama wax ku barayay dhibcood cusub.
Monitoring-Socodka / shaqeynayaan qabsashada shirkadaha, akhyaarey kale, ama qofka ay u abuuraan uqaadineed ama tallaabo lagu saxayo qaado.
Social Perceptiveness-Ahaanshaha ma ah mid halmaansan reactions othersI iyo fahamka sababta ay u dhaqmaan sida ay sameeyaan.
falalka Control-Waxkabeddelka la xiriira tallaabooyinka othersI.
dadka kale Suuq-oolka ah inay wax ka beddelaan ama garashadoodii.
Dhexdhexaadinta-Gudbinta dadka kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan kala duwanyahay,.
Orientation-ahaantii Service isku dayaya in ay ka heli xeelado si ay u taageeraan dadka.
Advanced Problemsolving-Kala dhibaatooyinka sare iyo cilmi baarista faahfaahin oo la xiriira qiimayn iyo in la dhiso ilaa xal kale oo codsan dawayn.
Hawlgallada Qiimeynta-baadhaya shuruudaha wax soo saarka iyo waxay u baahan tahay in ay soo saaraan qaabka a.
Technology Design-jaan marsho ama abuurista iyo technology in ay bixiyaan shuruudaha shaqsi.
Qalabka Selection-Go'aaminta qalab iyo qalabka ee nooc si dhab ah loo baahan yahay in hawl.
codsiyada wajigeeda-darista, alaabta, kaybalka, ama qalab guud ahaan la kulmaan caddaymaha.
Barnaamijyada habaynteeda-Qorista computer ku saabsan isticmaalka oo kala duwan.
Hawlgallada calls Monitoring-arkaa, qiimaynta, ama tilmaamo kala duwan si loo hubiyo in ay jirto makiinad hadda si fiican u shaqeeya.
Hawlgallada iyo taabta-Xakamaynta shaqeysiinta nidaamyadan ama qalabka.
Dayactirka-Sameynta qarashka xannaaneynta in uu yahay joogtada ah ee qalabka iyo go'aan goorta iyo waxa sort of dayactirka loo baahan yahay.
sababaha maaraynta kala carar iyo doorashada waxa jihada si ay u tagaan oo ku saabsan mid ka dhib-Aqoonsiga.
waxyaabaha ama nidaamyada qamaar-celinta oo isticmaalaya qalab la doonayo.
imtixaan oo ka mid ah waxyaabaha Quality Control-imtixaanka-Sameynta, xal, ama farsamooyin si loo qiimeeyo tayada shaqo ama aad u fiican.
View iyo Go'aan ka qaadashada ku-la tixgaliyo ku eedeeyay dhigma iyo faa'iidooyinka ka mid ah hawlaha waa suurto gal ah in la helo mid ka mid ah in uu yahay haboon.
Falanqaynta-Garashada waxa sort of nidaamka waa in shaqayn iyo sida beddelka in howlgallada, dhibaatooyinka, iyo deegaanka ay saamayn karaa natiijada.
nidaamyada ama tilmaamo ah waxqabadka iyo sidoo kale iyadoo la raacayo gool ee qalabka Methods Falanqaynta-Aqoonsiga, falalka lahaa baahan yahay in la hagaajiyo ama waxtarka habboon.
Timemanagement-Maareynta ka mid ah ayaa munaasabadda u gaar ah.
Management of Financial Resources-Go'aansiga sida lacagta shaki la'aan waxaa loo isticmaali doonaa si ay u bartaan shaqo oo dhamaystiran, iyo iibka lacagta kuwan.
Maamulka Qalabka Hantida-In qofka oo la kulma dhinaca isticmaalka habboon ee wax soo saarka, adeegyada, iyo qalabka si dhab ah loo baahan yahay in shaqada loo doortay samayn.
Maamulka shaqaalaha Resources-Building, Waxyoon, iyo dadka ku fiiqaya sida ay u shaqeeyaan, la aqoonsado shakhsiyaadka aad ugu wanaagsan ee xirfadiisa in.
In ka yar-badan Diploma School Higher a
Diploma Senior High School (ama GED ama Senior Certification School isu-)
Connect ee Heerka (ama kale stage LABO sano ah)
Control Job Skills Shuruudaha
Success / day – 89.14%
Hoggaanka – 84.91%
Iskaashiga – 90.99%
Welwelina Qaar kale – 93.81%
Sinaanta Cultural – 84.16%
gaynta cadaadis – 85.05%
Fiiro gaar ah u Detail – 84.62%
Adoo ka fakaraya Analytical – 85.71%